Semalt Revèle My Mythes Ndị Gbasara Obodo Na Le Référencement
Ọ bụ ezie na ihe ndị dị mkpa banyere SEO bụ ndị na-agbagha, ụfọdụ ndị na-edebe weebụ na-ejikwa iji SEO eme ihe maka mgbasa ozi kachasị mma. Ma, nyocha di iche iche na-ekwusi ike na abuo abuo di iche iche nke ndi ulo oru kwesiri inwe bu ndi ozo na ndi nleta.
Onye isi ọkachamara nke ọrụ numériques Semalt , Artem Abgarian na-achọpụta ihe ndị ọzọ na-emekọ ihe ọnụ.
Agụmakwụkwọ na-agbanwe ngwa ngwa, na-emekarị mgbanwe nke algorithms. Ọtụtụ ndị na-eme mgbanwe maka algorithms na-emepụta kwa ụbọchị. Ma, ọtụtụ mgbanwe adịghị emetụta arụmọrụ nke saịtị weebụ, n'ihi na ha na-agbanwe agbanwe karịsịa site na mgbanwe mgbanwe ndị nwere ike ọ gaghị enwe mmetụta pụtara ìhè.
2. Usoro dị iche iche
Ụfọdụ akụkụ nke SEO bụ ọtụtụ usoro, nke na-emetụtakarị ohere kachasị mma na ịmepụta saịtị. Ọ bụ ezie na, ọtụtụ n'ime ndị ọrụ SEO na-elekwasị anya n'ịzụ ahịa ahịa ndị dị ka ịchọpụta okwu ndị bụ isi, ihe ndị dị n'ime ha, ihe nhazi nke ọkwa na nyocha nke azụmahịa.
3. Enweghị ike
Ndị mmadụ na-eche na SEO na-enweghị ike ịbanye n'ahịa ebe ọ bụ na nrụgide na-emekarị na algorithms na ndị ọzọ mgbanwe. Echiche bụ abụghị eziokwu dị ka ọtụtụ ihe dị mkpa nke SEO..A na-ebipụta akwụkwọ SEO dị ka Nyocha Search Engine na-enyere ndị ahịa aka melite ma chọpụta ihe dị mkpa.
4. Ogologo oge anya
Ọ na-achọ oge iji debe ọkwa na ịmepụta web saịtị na weebụ, nke a bụ ihe na-enweghị mgbagha. Otú ọ dị, ọ dị mma, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na saịtị ahụ ga-adịcha mma.
N'ihe banyere SEO volatilité, ndi mmadu kwenyere na nke a abughi ihe kwesiri ntukwasi obi. Ọ dịghị onye na-eduzi kpọmkwem na classement ma ọ bụ trafic na-enweghị PCC. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ebe nrụọrụ weebụ na-adịkwu adịgide na SEO, ọ nwere ike ịchọta nsogbu dị iche iche.
Iji nweta ihe ndị kasị mma, ọ ga-etinye ego, oge na ihe ndị ọzọ. Lementent abụghị pasta, kama ọ dị ntakịrị karịa ndị ọzọ canaux publicitaires payants such as PPC, ma ọ bụ ịzụ ahịa site na iji ụzọ ndị ọzọ.
7. Mgbanwe weebụ Weebụ
Ọ bụ eziokwu na ị na-eme ka ụlọ ọrụ na-eweta ụfọdụ mgbanwe na ha na saịtị. Mgbe ụfọdụ, nke a nwere ike ime ụfọdụ mgbanwe, mgbe ahụ na ndị ọzọ, na-agbanwe nke zuru ezu na saịtị weebụ zuru ezu iji nweta ya zuru potentialiel. Ihe niile a gbanwere bụ ihe ị ga-eme iji nweta ihe mgbaru ọsọ SEO.
Taa, umuntakiri nile na-eleba anya karia nke oru nyocha. Ndị ahịa na-eji search engines iji nweta ngwaahịa, ọrụ, ndị na-eweta na ozi. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị chọpụta ihe ọ bụla ị chọrọ ịchọta, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na -